TOAMASINA : Ramatoa iray maty natsipin’ ny sakaizany avy teny ambony rihana
Miady lava. Ramatoa iray mivarotra ao Bazary Be Toamasina no namoy ny ainy vokatry ny herisetra nataon’ilay lehilahy sakaizany. Ity farany izay niterahany iray. 21 août 2019
Ny alahady 18 aogositra lasa teo, niadivan’ilay lehihaly indray izy. Tsy fikasihan-tanana fotsiny fa niafara tamin’ny fanosehana avy teny ambony rihana. Vokany, naratra mafy ilay ramatoa. Niray hina ny manodidina nitondra ity farany teny amin’ny hopitaly sy niantso mpitandro filaminana nisambotra ilay nahavanon-doza. Ny marainan’ny alatsinainy 19 aogositra anefa dia tsy tana ny ainy.
Ny alin’ny alahady io, efa saika niharan’ny fitsaram-bahoaka ilay lehilahy namono vady. Ireo mpivarotra ao Bazary be dia samy manitrikitrika fa fijaliana lava no nanjo an’ilay vehivavy vokatry ny daroka matetika mahazo azy. Ny fianakaviany izay nametraka fitoriana amin’izao raharaha izao. Mpiasa amina orinasam-panjakana iray ao Toamasina ilay lehilahy nahavanon-doza.